ओलीयुग अन्त्यका लागि भारतीय गुप्तचरी संस्था 'रअ' को यति ठूलो खेल | Citizen Post News
काठमाडौं । ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भन्ने उखानजस्तै नेपालको राजनीतिमा भारतले दुईधारे नीतिको प्रयोग गर्न खोजीरहेको छ । त्यसका लागि त्यहाँका गुप्तचर अधिकारी काठमाडौंमा सक्रिय छन् । नेपाल मामिला हेर्ने अधिकारीहरूले दुई महिनापछि नेपालको राजनीतिक समिकरण कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा खेलोफड्को गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसका लागि विपक्षी दलबाट डा. कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालाई अगाडी बढाइएको छ । उनलाई हिन्दु कित्तामा नेपाली कांग्रेसलाई उभ्याउनका लागि भनिएको छ । यसबीचमा उनीसँग तत्कालिन भारतीय जनता पार्टीका नेता शत्रुधन सिन्हा, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलगायतले पनि भेट गरिसकेका छन् । अन्य विभिन्न तह र तप्काका अधिकारीले पनि भेट गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष सरोकार राखीरहेको भारतमा यतिबेला नयाँ सरकारका लागि निर्वाचन जारी छ । लोक सभा निर्वाचनका नौ संस्करण मध्ये ५ औंको मतदान सोमबार सकिएको छ । तर, भारतीय गुप्तचर र विभिन्न निकायका अधिकारीहरूले भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समिकरण भत्काएर आफू अनुकुलताको व्यवस्थाका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
त्यसका लागि भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ्स (रअ) र इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आइबी)का विभिन्न तहका अधिकारी नेपालका राजनीतिज्ञसँग छलफलमा रहेका छन् । भारतीय निर्वाचनबाट यस पटक पनि नरेन्द्र मोदीको सरकार आए, नेपालमा हिन्दु राज्य कायम गराउने दिशामा पनि छलफल जारी रहेको उच्च स्रोतहरूको दाबी छ ।
यी दुवैले भारतीय प्रशासनको इच्छाका आधारमा हुने अनुकुल व्यवस्थाका लागि अभ्यास गर्नेछन् । यसैकारण पनि नेपालमा हिन्दुवादी र राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको बहस छेडिएको छ भने सडकमा आन्दोलन पनि जारी राखिएका छन् । यहिबीचमा पूर्वराजाका विभिन्न ठाउँका भ्रमण पनि भएका थिए ।
ओली सरकार किन मन पराएन ?
ओलीको नौ महिने सरकारका बेला भारतसँग भएका पुराना सन्धी र सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नका लागि नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठन भएको थियो । उक्त समूहका ९ चरणमा भएका बैठकबाट तयार भयो इपिजि प्रतिवेदन । नेपाल सरकारले बुझे पनि भारतीय सरकारले उक्त प्रतिवेदन बुझेको छैन । प्रतिवेदनमा भारतको हितविपरित नेपालको पक्षमा बढि निर्णय भएका छन् । सोही निर्णयमा सहमति जनाएका कारण इपिजीका भारतका संयोजक भगतसिंह कोसीयारीलाई रणनीतिक कारबाही गरिएको थियो ।
अर्थात्, उनलाई उत्तराखण्डमा यस पटक चुनावमा टिकट पनि दिइएन । नेपाल मामिला र भारतको सुरक्षा संयन्त्रमा रहेर काम गरेका पूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल अशोक मेहताले भारतले तत्कालै राजनीतिक हस्तक्षेप वा कुनै नीति अख्तियारी नगर्ला भन्ने सम्भावना पेस गरेका छन् । तर, त्यसबेला राजनीतिक समिकरण विगार्नका लागि उनै मेहताको उपस्थितिमा मधेसी जनाधिकार फोरमका रूपमा रहेको उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजित भएको थियो । अहिले, मेहतालाई भाजपा सरकारले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन ।
‘रअले नेपाल नीतिमा भाजपा सरकारको निर्णयलाई मानेको छ । तर, यसको अख्तियारी आइबीले लिँदै आएको छ । यसै कारण पनि नेपालमा हिन्दुत्व स्थापना गर्दै शाही शक्ति ल्याउने कि विकल्पमा जाने छलफल हुन सक्छ’, एक अधिकारीले भने,‘त्यसो नभएको खण्डमा सत्तारुढ पार्टीमा विभाजन ल्याएर समाजवादी कित्ता अघि सार्न सक्छन् ।’ हुन त भारतीय निर्वाचन सम्पन्न हुनै लाग्दा नयाँ शक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमको एकता गराई सदनको तेस्रो ठूलो शक्ति गठनको प्रक्रिया पनि उतैको चाहनाअनुसार भएको अनुमान गर्नेहरू पनि छन् ।
‘नेपालको इतिहासमा तेस्रो दलले कमजोर सरकार हाँकेका धेरै उदाहरण छन् । त्यो तत्कालिन राप्रपाको कुरा गरौं अथवा तत्कालिन एमालेको । यसैकारण राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई अवमुल्यन नगरौं’, उच्च स्रातले भन्यो,‘समाजवादी पार्टी बनेपछि डा. बाबुराम भट्टराई अबका प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्छन् ।’ त्यसो त सत्तारुढ नेकपामाथि विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि बारम्बार भनिरहेकै छन् । यो खतराबाट बच्नुपर्ने उनले बताउँदै आएका छन् ।
यता, राजावादीहरू भने भारतीय चुनाव, नेपाली सेनाको अवस्था र जनताको आन्दोलनको विषयलाई हेरिरहेका छन् । सडक आन्दोलन, कुटनीतिक पहल र नेपाली सेनाको गतिका आधारमा नै राजतन्त्रको पुनर्दोय हुनसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । तर, नेपालमा भारतीय राजनीतिको प्रभाव बलियो रहेका कारण उसैको स्वार्थको चलखेल अहिले पनि जारी छन् ।